UKHOZA UTHI IZOQEDELWA IMIDLALO YE-PSL – Sivubela intuthuko Newspaper
UKHOZA UTHI IZOQEDELWA IMIDLALO YE-PSL
USihlalo wePremier Soccer League (PSL) uDkt Irvin Khoza echaza ngokubuya kwemidlalo
USIHLALO wePremier Soccer League (PSL) uDkt. Irvin Khoza ukuqinisekisile ukuthi noma kanjani izophothulwa imidlalo ye-Absa Premiership osekuphele isikhathi eside yamiswa ngenxa yeCorona Virus.
Lokhu kudalulwa uKhoza kwisithangami sabezindaba ebekuhloswe ngaso ukuzocacisa ukuthi imidlalo izobuyela nini enkundleni emva kokuba uhulumeni wakuleli obhekelele ezemidlalo ememezele ukuthi nomdlalo kanobhutshuzwayo usungabuyela enkundleni.
“Imidlalo yeligi kulindeleke ukuthi ibe isiphothuliwe ngaphambi komhla-31 kuNcwaba. Lokho ngeke kwenzeke ngaphandle kokuvuma kwenhlangano elawula ibhola kuleli iSouth African Football Association (SAFA),” esho.
UKhoza ekhuluma kwisithangami nabezindaba uveze ukuthi bakubeke phambili ukuphepha kwezimpilo zabadlali yingakho besebenzisana nabezempilo kulesimo.
“Ukuphepha kwabadlali enye yezinto esiyibeke eqhulwini . Abaqondisi beBhodi lamaqembu lihlalile phansi ukubheka izinselelo zeCorona virus ezingabeka engcupheni amabhizinisi,” kuqhuba Khoza .
IPSL kuzokhumbuleka ukuthi isizimemezele izinkundla okuzodlalwa kuzo kanjalo nazozilolonga kuzo amaqembu ukuqedela lesizini. Isifundazwe saseGauteng yisona okuqokwe ukuthi amaqembu azokhempa kuso ukuzoqedela imidlalo esele.
“Sekunesikhathi Siba nemihlangano neSAFA sizama ukuqhamuka nosuku okuyilona okungabuya ngalo imidlalo njengoba uhulumeni esesinikile igunya lokuqedela imidlalo. Okumele sikuqonde ukuthi namaqembu akadlaleli ubumnandi kodwa afana namabhizinisi abalulekile kuleli ngenxa yomnotho awulethayo,” .
IPSL ibihlongoza ukuthi imidlalo ibuye mhla zi-18 kuNtulikazi. Konke sekulele ngakwiSAFA eholwa uDkt. Danny Jordaan ukuthi ivume u